संजोग कोइराला जब स्वस्तिमा र निश्चलको वेडरुममा सिधै गए ? घटना सुनाएर गरे रमाइलो (भिडियो हेर्नुस्) - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / संजोग कोइराला जब स्वस्तिमा र निश्चलको वेडरुममा सिधै गए ? घटना सुनाएर गरे रमाइलो (भिडियो हेर्नुस्)
नेपाली कलाकारहरु मध्य केहीको निकै राम्रो साथीको सम्बन्ध छ । ति मध्य स्वस्तिमा खड्का र संजोग कोइराला पनि एक हुन् । उनीहरुको बिचमा निकै राम्रो मित्रता रहेको कुरा एक टेलिभिजन अन्तरवार्ताका क्रममा स्वस्तिमाले बताएकी छन् । उनलाई संजोगका कारण कहिल्यै अप्ठेरोमा पर्छु जस्तो लाग्दैन । उनलाई संजोगले निकै सहयोग गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
स्वस्तिमा र संजोगको यति राम्रो सम्बन्ध छ की उनीहरु एक अर्काको घरमा निस्फिक्री जान्छन् । यहाँ सम्मकी संजोग स्वस्तिमाको वेडरुम सम्म पनि धेरै पटक पुगेका छन् । स्वस्तिमाले आफु अति अन म्यानेज भएका कारण कोठामा आफ्ना सामान यता उता छरिने गरेको बताएकी छन् । हामी दुवै जना उस्तै छौं त्यसैले हाम्रो कोठा निकै भद्रगोल हुन्छ । संजोग सिधै हाम्रो कोठामा आउँदा यस्तो भद्रगोल देखेर पनि कुनै प्रतिकृया दिन्नन् । उनको एक अर्काको ब्यक्तिगत जिवन र बानी प्रति कुनै परवाह नगर्ने बानी मन पर्छ , स्वस्तिमाले भनिन् ।
अधिकांश नेपाली चलचित्रका नायीकाहरु युटुब तर्फ आकर्षित भएका छन् । उनीहरुलाई सिधै युटुबर नै त नभनिहालौ तर पनि गज्जबका कन्टेनहरु राख्दै युटुबको ट्रेन्डिङ सम्म पर्न भ्याउछन् । संजोग र उनको पत्नी तथा नायीका वर्षा राउत पनि युट्युवमा छाउँछन् । तर स्वस्तिमा र उनका पति निश्चल बस्नेत भने सामाजिक सञ्जालवाट अलि टाढा छन् ।
वर्षाका प्राय,उनका पति संजोग कोराइला सँग बनाएका भ्लगहरु राखेकी हुन्छीन् । भिडियो कन्टेन सामान्य नै हुने गरेता पनि उनको भिडियोलाई रुचाइएको हुन्छ । कहिले काहिँ त युटुबको ट्रेन्डिङ पनि खाने गर्छिन । उनको युटुबमा १ लाख ९६ हजार सव्सक्राईबर जोडिएका छन् ।